स्याङ्जाकी बालिका ‘ब्रेन ट्युमर’उपचारको लागि सहयोग जुटाउदै | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← विदेशबाट आउनेलाई पीसीआर अनिवार्य
कन्काईको बाढीले बाँध फुटायो, १०५ घर डुबानमा →
स्याङ्जाकी बालिका ‘ब्रेन ट्युमर’उपचारको लागि सहयोग जुटाउदै
Posted on 20/07/2020 by सुरेश गुरुङ | टिप्पणी छोड्नुहोस्
मणि गुरुङ /पोखरा ‘ब्रेन ट्युमर’ रोगका कारण पोखराको फेवासिटी अस्पतालमा उपचाररत बालिकाको उपचारको लागि सहयोग जुट्न थालेको छ । स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका वडा नं. २ घर भएकी १४ वर्षीया बालिका ममता गुरुङलाई ब्रेन ट्युमर देखिएपछि विगत ४ महिनादेखि उनको नियमित उपचार भइरहेको छ ।
पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बालिकाको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै मिलन वल्ड डट न्युज र मर्दीन्यूज डट कममा समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि ममता गुरुङको उपचारमा सहज गराउन स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफन्तले सहयोग गर्न थालेका छन् । जसअनुसार आज बिहीबारसम्म १ लाख ६४ हजार १ सय २० रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ भने उक्त रकम ममताकी दिदी ओममाया गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
ममताको परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषिमात्रै हो। ‘थोरै खेतबारी भएको उनको परिवारको कृषिबाट वर्षभरिको उत्पादनले खान लाउन पनि धौधौ हुन्छ,’ ममताका मामा खेमबहादुर गुरुङले भने, ‘त्यसमाथि गरीखाने समयमा छोरी यसरी थला परेपछि हातमुख जोड्न जोहो गर्न मेलापात जाने कि उपचार खर्च जुटाउनु भन्नेमा भएको छ ।’ भाञ्जीको उपचारको लागि कतैबाट सहयोग जुटाइदिन पनि उनले आग्रह गरे । त्यसैगरी ममताको उपचारमा लाग्ने रकम सहयोग गरिदिन परिवारले पनि देशविदेशमा रहेका सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
पोखराको फेवासिटी अस्पतालमा विगत चार महिनादेखि उपचाररत ममताको रकम अभाव भएपछि अप्रेसन हुन सकेको छैन । फेवासिटी अस्पतालको सघन कक्षमा उपचाररत उनको उपचारमा १० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
ममतालाई सहयोग गर्न चाहनेले ममताका मामा खेमबहादुर गुरुङको मो. ९८५६०११७५२, ९८४६०४१७५२ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ । त्यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकको पृथ्वीचोकस्थित शाखाको ओममाया गुरुङको नाममा रहेको खाता नम्बर ००४२१६००४४३९५१०००००१ मा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन ।